Mfe Import / Export Ndi ana-akpo ka / si akporo ekwentị
> Resource> Android> Easily Import / Export Ndi ana-akpo gaa na site na ekwentị mkpanaaka na Android
Okporo mmiri gị ochie Android ekwentị maka onye ọhụrụ, dị ka Samsung Cheta 3, na chọrọ nyefee kọntaktị n'etiti ha? Ịchọ ụzọ mbupụ kọntaktị site na Android na kọmputa ma ọ bụ Outlook, Gmail maka nkwado ndabere na mpaghara, bụrụ na ị nwere ike mmadụ na mberede ida ha? Chọta ọ dịghị ụzọ bubata kọntaktị a CSV faịlụ ma ọ bụ VCF faịlụ gị Android ekwentị? Ọ bụghị a nnukwu ihe. Ke ibuotikọ emi, ga-amasị m gosi gị ụfọdụ ihe ngwọta na-eme ka ya. Dị na-agụ na. Daashi: Unu onwe unu kwa na-achọ ihe mfe na mma ụzọ iji nweta data kpọfere kọmputa, a infographic ga-agwa gị.
Nkebi nke 1: 2 ụzọ nyefee kọntaktị site na Android na kọmputa
Part 2: 3 ụzọ nyefee kọntaktị site na kọmputa na-Android
Part 3: Olee nyefee kọntaktị site na Android ka Android
Ugwu Android dị ka a flash mbanye
Olee mbupụ VCF si gam akporo ka PC MobileGo
otú nyefee kọntaktị site na Android na kọmputa
Kpam kpam free;
Kwado nyefee kọntaktsị na akaụntụ, dị ka Google, Facebook, Twitter, wdg;
Detuo Android kọntaktị na Outlook, Windows Address Book, Windows Live Mail;
Ekwe ka selectively mbupụ kọntaktị;
Kwa na-ewe oge;
Ga-enwe eriri USB;
Method 1. Olee otú iji selectively idetuo Android kọntaktị na kọmputa na MobileGo
* Nyefee niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ si gam akporo na kọmputa, na Anglịkan
* mmekọrịta Android kọntaktị na Outlook, Windows Live Mail, Windows Address Book
* jikota oyiri kọntaktị maka mfe management
* Dezie keukwu na Ama kọntaktị, gụnyere Email adreesị, nọmba ekwentị, ụlọ ọrụ aha , adreesị ụlọ, wdg
* E wezụga kọntaktị, ọ Nyefe SMS, ngwa, music, video, foto na akwụkwọ.
Gaa Mac version - Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)
The akwado Android OS, igwe na mbadamba
Android Site Android 2.0 ka Android 5.0
Akwado Android ekwentị mkpanaaka na & mbadamba
Manufacturers Samsung, HTC, LG, Motorola, Sony, Google, ZTE, LG, Huawei, Acer, Asus, Dell, Mụta ihe >>
Ndị na-esonụ nkuzi na-agwa gị otú ime Android kọntaktị transfer na Windows vesion. N'ihi na Mac ọrụ, ị pụrụ ịgbaso kwa. Otú ọ dị, otu ihe ị ga-doro anya na Mac version adịghị ka ị mmekọrịta Outlook na Android ekwentị ma ọ bụ ihe ọ bụla na akaụntụ.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị omume na jikọọ gị Android ekwentị
Ka malitere, download na ịwụnye MobileGo na PC gị. Ozugbo gụchara na echichi, ị kwesịrị ị na-agba ya. Wee soro connect wizard jikọọ gị Android ekwentị gị na PC site eriri USB ma ọ Wi-Fi. Nke a na usoro ga-akpaghị aka ịchọpụta ngwaọrụ gị na-egosipụta ya na n'ụlọ window.
Cheta na: Nye ndị MobileGo a ogbugba eriri? Mkpa ka ị wụnye kwesịrị-nwere MobileGo ngwa na gị android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Copy kọntaktị site na Android na kọmputa, Outlook, wdg
-Aga n'aka ekpe sidebar na pịa Ndi ana-akpo. Kọntaktị niile ga-emere na nri panel. Họrọ kọntaktị ị na-aga na mbupu, na pịa Export> Export kọntaktị niile na kọmputa ma ọ bụ Export kọntaktị ahọrọ na kọmputa.
Nke abụọ adaala menu abịa, nke na-enye gị ise nhọrọ. Họrọ ka vCard faịlụ ịzọpụta exported kọntaktị dị ka vCard faịlụ na kọmputa. Ọzọkwa, ị nwekwara ike mbupụ kọntaktị na Outlook, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Windows Live Mail.
Method 2. Olee nyefee vCard faịlụ site Android na kọmputa maka free
Nzọụkwụ 1. On gị Android ekwentị, na-aga Ndi ana-akpo ngwa.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ menu ma họrọ Import / Export> Export ka USB Nchekwa. Mgbe ahụ, na kọntaktị niile ga-azọpụta dị ka a VCF na na Android SD kaadị.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị android ekwentị na kọmputa na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 4. Go ịchọta gị Android ekwentị SD kaadị nchekwa na idetuo exported VCF na kọmputa.
Olee mbubata Excel / VCF ka Android Google mmekọrịta
Olee ka mmekọrịta Google kọntaktị na Android MobileGo
otú nyefee VCF, Outlook, wdg ka Android
Kalenda (Weghachi si ndabere faịlụ)
Mmekọrịta kọntaktsị na Gmail, Facebook, Twitter, na ndị ọzọ na-Android;
Import multiple VCF ka Android;
Nyefee na kọntaktị site na Outlook, Windows Live Mail, Windows Address Book ya;
Detuo ihe faịlụ effortlessly;
Were oge dị ukwuu;
eriri USB bụ kwesịrị;
Mkpa Google akaụntụ;
Method 1. Olee mbubata Outlook, Windows Live Mail, Windows Akwụkwọ Adreèsị na VCF ka Android
Mbubata kọntaktị site na ụfọdụ akaụntụ, dị ka Outlook Express, Windows Address Book na Windows Live Mail, Wondershare MobileGo abịa kemfe. Ekele, ọ na-eme ọ dị mfe dị ka ole na ole dị mfe clicks.
Cheta na: Iji mụtakwuo Ama banyere Wondershare MobileGo, biko pịa ebe a.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ekwentị na kọmputa
Ka malitere, awụnyere na-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileGo na kọmputa. Jikọọ gị android ekwentị na kọmputa na iji eriri USB ma ọ bụ n'elu WiFi. Mgbe ghọtara, gị Android ekwentị ga-gosiri na isi window, ya faịlụ categorized na ekpe sidebar.
Cheta na: Wụnye MobileGo ngwa na gị android ngwaọrụ mgbe ị chọrọ ịkwaga kọntaktị na Android-ejighi eriri.
Nzọụkwụ 2. Nyefee kọntaktị site na Outlook, kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na-Android
Na ekpe kọlụm, pịa Ndi ana-akpo. Na nri panel, pịa Import> Bubata kọntaktị site na kọmputa. Ị ga-esi ise nhọrọ: si vCard faịlụ, si Outlook Export, si Outlook 2003/2007/2010/2013, si Windows Live Mail na si Windows Address Book. Họrọ akaụntụ ị ebe kọntaktị gị na-echekwara na mbubata kọntaktị.
Method 2. Olee mbubata kọntaktị site na Excel / VCF ka gam akporo na eriri USB
Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee kọntaktị site na Excel ka Android, ị kwesịrị ị na-eso dum nkuzi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere VCF na kọmputa gị, i nwere ike ikwu mbụ 4 nzọụkwụ. Gụọ ihe ndị na nzọụkwụ 5 na mgbe e mesịrị.
Nzọụkwụ 1. Land gị Gmail peeji na ihe ịrịba ama na akaụntụ gị na paswọọdụ.
Nzọụkwụ 2. Na ekpe kọlụm, pịa Gmail na-egosi ya dobe ala ndepụta, wee pịa Ndi ana-akpo.
Nzọụkwụ 3. Click Ọzọ ma họrọ Import .... Họrọ Excel na kọntaktị gị na-azọpụta na mbubata ya.
Nzọụkwụ 4. Ugbu a, kọntaktị niile na Excel e uploaded gị Google akaụntụ. Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ duplicates, pịa More> Chọta & jikota duplicates .... Mgbe ahụ, Google amalite jikota oyiri kọntaktsị na na ìgwè.
Nzọụkwụ 5. Go ka Ọzọ na pịa Export .... Na mmapụta dialog, na-ahọrọ na mbupụ kọntaktị dị ka vCard faịlụ. Na, na, pịa Export iji zọpụta ya na kọmputa.
Nzọụkwụ 6. Ugwu gị Android ekwentị dị ka a flash USB mbanye na kọmputa na iji eriri USB. Chọta na-emeghe ya SD kaadị nchekwa.
Nzọụkwụ 7. Navigate na nchekwa ebe exported VCF a zoputara. Idetuo na mado ya na gị na Android ekwentị SD kaadị.
Nzọụkwụ 8. On gị Android ekwentị, mgbata Ndi ana-akpo ngwa. Site taping menu, ị ga-esi ụfọdụ nhọrọ. Enweta Import / Export.
Nzọụkwụ 9. Kpatụ Import si USB Nchekwa ma ọ bụ Import si SD kaadị. Gị Android ekwentị ga-ịchọpụta VCF adn mbubata na kọntaktị ngwa.
Method 3. Olee ka mmekọrịta Google kọntaktị na Android
Gịnị ma ọ bụrụ gị Android ekwentị atụmatụ Google mmekọrịta? Ọfọn, ị nwere ike directyly mmekọrịta Google kọntaktị na ọbụna kalenda gị Android ekwentị. N'okpuru ebe a bụ ndị nkuzi.
Nzọụkwụ 1. Gaa Isetịpụ na gị Android ekwentị, ma họrọ Akaụntụ & mmekọrịta.
Nzọụkwụ 2. Chọta Google akaụntụ na-abanye n'ime ya. Mgbe ahụ, nne Mmetụta mmekọrịta Ndi ana-akpo. Tinye akà rà mmekọrịta kalenda ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ, enweta mmekọrịta Ugbu a ka mmekọrịta niile Google kọntaktị gị Android ekwentị.
Cheta na: Ọ bụghị ihe niile gam akporo igwe-enye gị ohere ka mmekọrịta Google kọntaktị.
Nkebi nke 3: otú nyefee kọntaktị site na Android ka Android
* Nyefee kọntaktị niile site na otu Android na ibe-1 click
* Full kọntaktị oyiri na ụlọ ọrụ aha, Job aha, adreesị ozi-e, adreesị ụlọ na ndị ọzọ Ama
* Ọ bụghị nanị na kọntaktị, ọ na-akpalikwa ngwa, SMS, music, photos, video na oku na-aga ndekọ
* 100% dakọtara na 2,000 ntị, gụnyere Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG, wdg
* Egwu-free na ọ dịghị mma ọnwụ
* E wezụga Android, kwekọkwara iOS & Symbian
Lelee akwado Android na ụdị na-OS
Android Site Android 2.1 ka Android 5.0
Manufacturers Samsung, LG, HTC, Motorola, Google, Sony, ZTE, Huawei, Acer, Mụta ihe >>
Nzọụkwụ 1. Jikọọ ma gam akporo igwe na kọmputa
Wepụ USB cables na jikọọ ma gam akporo igwe na kọmputa. Ẹkedori Wondershare MobileTrans na ọ ga-ozugbo ịchọpụta abụọ Android igwe. Mgbe ahụ, dị ka ndị na-esonụ screenshot egosi, abụọ gam akporo igwe ga-egosi n'elu ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Copy kọntaktị site na Android ka Android
Iji nanị detuo kọntaktị, i kwesịrị uncheck ndị ọzọ faịlụ. Mgbe ahụ, na-amalite Android kọntaktị transfer site na ịpị Malite Copy. Mgbe kọntaktị transfer zuru ezu, kọntaktị niile ga-adị gị ọhụrụ Android ekwentị.
Download Wondershare MobileTrans ịkwaga kọntaktị site na Android ka Android na gị onwe gị!